In ka badan 20 qof oo ku dhimatay dagaallada ka socda Mooyaale – warqaat.com Information About Somali New's Today
HomeWARARKA MAANTAIn ka badan 20 qof oo ku dhimatay dagaallada ka socda Mooyaale
November 16, 2018 Falastiin Axmed WARARKA MAANTA Comments Off on In ka badan 20 qof oo ku dhimatay dagaallada ka socda Mooyaale
Magaalada Mooyaale waxaa Wali ka socda dagaallo ay dhiig badan ku daateen,kuwaasoo u dhaxeeya Qowmiyaddaha Soomaalida iyo Oromadda.
Sida ay dadka degaanka u sheegeen Warbaahinta dagaalladii ugu dambeeyay ee ka dhacay magaalada Mooyaale waxaa ku dhintay dad ka badan 20 qof halka 102 kalana ay ku dhaawacmeen.
Dagaalka ayaa wali xal laga gaarin , waxaana wali ka socda dagaallo sidda ay xaqiijiyeen dadka degaanka.
Madaxa xisbiga Oromada ee degmada Mooyaale Cali Tache ayaa sheegay iney dagalladu dhaceen wuxuu Soomaalida uu ku eedeeyey iney dhul ballaarsi doonayaan.
Wuxuuna intaa ku daray Soomaalida dagaalka soo qaadday iney dooneyso magaalada iney xarun gobol ka dhigtaan, cabashadoodana ka maamul oroma ahaan ay deegaanka iyo dowladda dhexeba cabashadooda gaarsiiyeen balse ay weli jawaab ka helin.
668,324 total views, 4,199 views today
668,324 total views, 4,199 views today War ka soo baxay Hay’ada Nabadsugida iyo Sirdoonka Qarank ayaa waxaa lagu sheegay in Ciidamada Amniga ay Gacanta ku dhigeen Maxkaxdii ka dambeeyasay weerarkii dadka badan ku dhinteen ee lagu qaaday […]
668,196 total views, 4,198 views today
668,196 total views, 4,198 views today Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta qabatay munaasabad lagu daahfurayay Barnaamijka Carabiyaynta Dastuurka KMG ah oo ay ka soo qeybgaleen Wasiir Ku-Xigeenka Arrimaha Dastuurka iyo Safiirka […]
668,225 total views, 4,198 views today
668,225 total views, 4,198 views today Wareegto ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha Dowlad-goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam(Madoobe) ayaa Maanta oo Khamiis ah waxaa lagu Magacaabay Hanti dhowraha guud ee Jubbaland Wareegtada ayaa waxaa Hanti dhowrahaGuud ee Jubbaland […]
668,289 total views, 4,200 views today
668,289 total views, 4,200 views today Kulan socday in ka badan sideed saacadood ayaa waxa uu Turkiga ku dhexmaray Mas’uuliyiin uu horkacayay Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Soomaaliya Maaxamed Cabdullaahi Salaad(Omaar) iyo Mas’uuliyiinta Shirkadda Favori ee Maamusha Garoonka […]
668,346 total views, 4,199 views today
668,346 total views, 4,199 views today Taliye ku xigeenka Ciidamada Booliska Dowlad Goboleedka Galmudug Col, Cabdi Jaamac Cabdulle ayaa shaaciyay in kadib baaritaano ay sameeyeen ay heleen halkii laga soo abaabulay weerarkii lagu qaaday Xarun uu Gaalkacyo […]